Root iyo Soo Celinta Samsung Galaxy S3 oo leh Android 4.1.2 | Androidsis
Francisco Ruiz | | Soo kabashada Android, Xididka Android, Samsung, Tababarada
Casharkaan soo socda waxaan ku barayaa qaab aad u fudud sida loo sameeyo xidid iyo rakibi soo kabashada wax laga beddelay Samsung Galaxy S3 modelo GT-I9300 leh nooca Android 4.1.2.
Casharradan ayaa u adeegi doonta dhammaan kuwa adeegsada, iyaga oo ka baqaya in ay yeeshaan cillad cilladaysan iyo suurtagalnimada in culeyska laga baqo uu saameyn doono iyaga geeri kedis ah, waxay si rasmi ah u cusbooneysiiyeen xaruntooda qaybtii ugu dambaysay ee firmware-ka ah Samsung, sidoo kale adoo adeegsanaya OTA ama Kies.
1 Tallaabooyinkii hore
2 Sida loo xidido Samsung Galaxy S3 Android 4.1.2
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan samayno waa inaan ku rakibno wadayaasha darawalkeena barta kombuyuutarka, haddii aad horay u rakibtay Kies oo aad marba telefoonka ku xidhatay oo aad si sax ah u rakibayso, haddii kale, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waxay noqon lahayd inaad soo dejiso oo aad rakibto Kies ka bogga rasmiga ah ee Samsung.
Marka terminalkeena la rakibo lana aqoonsado waxaan dib u bilaabi doonaa PC-ga waana sii wadaynaa talaabooyinka xiga.
Laga soo bilaabo Samsung Galaxy S3 Waxaan dhaqaajin doonnaa khaladka USB-ka ee laga helay Kala-doorashada Hormarinta, ka dib waan xiri doonnaa boosteejada oo waxaan ku sii wadaynaa tallaabada xigta
Marka xigta waxaan soo degsan doonnaa CFRoot by Chianfire y Odin, mar alla markii aan soo dejisanno, waxaan ka furi doonnaa meel kasta oo kombuyuutarradeena ah, iyadoo la doorbidayo kuwa Miiska.
Sida loo xidido Samsung Galaxy S3 Android 4.1.2
Hadda waan fulin doonnaa Odin waanan aqbalidoonaa rukhsadaha aad codsato, waxaan arki doonaa shaashad sida tan hoos ku lifaaqan:
Waxaan gujineynaa badhanka oranaya PDA oo xulo feylka .TAR u dhigma CFroot la soo dejiyey oo hore loo siibay.
Waa inaan aad u taxaddarnaa oo aan calaamadinnaa sanduuqa RE-Partition lama hubiyo, WAAN KU SOO CELIYAA, RE-Partition-ka waa in aan la hubinin, kaliya Auto Reboot iyo sanduuqyada F.Reset Time.
Hadda waxaan shidi doonaa Samsung Galaxy S3 Qaabka soo dejinta, si tan loo sameeyo, laga bilaabo mobilada waanu daari doonnaa adoo riixaya isla mar ahaantaana aan sii deynayna badhanka mugga oo lagu daray badhanka Guriga ama furaha dhexe iyo Awoodda,
Waxaan ku xireynaa kombuyuutarka markii Odin uu aqoonsado waxaan riixeynaa badhanka Start waanan ka tagi doonaa shaqada si aan u dhamayno.
Marka mobiilku dhammaado wuu dib u bilaabi doonaa Odinna eraygu wuxuu ka muuqan doonaa qaybta midig ee sare PASS.
Si loo hubiyo in Root ayaa saxay waxaan gali karnaa khaanada arjigeena Galaxy S3 oo hubi in arjiga la rakibay Supersu.
Macluumaad dheeraad ah - Samsung Galaxy S3, sida loo xaliyo dhibaatada dhimashada lama filaanka ah
Soo dejiso - Oden, CFroot Galaxy S3, Kies
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S3, Root iyo Soo Celinta Android 4.1.2
122 faallooyin, ka tag taada
Waa salaaman tahay waxaan hayaa samsun glaxy s3 t999 walina ma aysan sii deynin romerka rasmiga ah ee loo yaqaan 'jelly bean 4.1.2' sidoo kale hal abuurayaasha Rom midkoodna ma sameynin mid i qanciya, ma ii sheegi kartaa hadii ay jirto si kasta oo Gmailkeygu yahay fhir27@gmail.com
Ku jawaab Handelson
haye waan xididadeeyay samsung galaxie s3 mini kudhowaad 1 sano kahor, waxwalba waa hagaagsanaayeen ilaa iyo asbuucii lasoo dhaafay superSU waxay iweydiisay inaan cusbooneysiiyo binaries, horeyba waan isku dayay mana awoodo, ma i caawin kartaa
Ku jawaab santiagp martinez
shaqeeyaa rom kasta 4.1.2 ???
Ku jawaab morddaz
Tani waxaa loogu talagalay qalabka rasmiga ah ee Samsung.
Markay ahayd 09/02/2013 06:30 PM, «Disqus» ayaa qoray:
saaxiib su'aal ,, marka rakibidda 4.1.2 ay gebi ahaanba baabi'ineyso halista dhimashada lama filaanka ah ?? maxaa yeelay hadii kale waxaa la doorbidaa in aan xidid loo dhigin si aysan u lumin dammaanadda haddii ay dhacdo ..
Aragti ahaan haa, wali ma jiraan warbixino la ogyahay oo ku saabsan dhimashada lama filaanka ah ee android 4.1.2
Markay ahayd 12/02/2013 22:13 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waa salaaman tahay Francisco, waad ku mahadsan tahay casharka, runta ayaa ah inay aad u caddahay oo sax tahay. Waxaan ku guuleystey inaan xididkayga S3. Hadda shaki ayaa soo ifbaxaya. Waxaan hayaa fariin aan ku cusbooneysiiyo nidaamka. Waan sameyn karaa Xidid ma iga lumi doonaa? Khatar intee leeg ayaa jirta? Mahadsanid
haa laakiin waad waayi doontaa xididka waana inaad ku celisaa hawsha markale
Salaan! Waxaan hayaa S3 aan cusbooneysiiyay ilaa 4.1.2 oo waan rujiyay sababta oo ah waxaan dhibaato ku qabaa Google Play Store. Weli weli dhibaatooyin ayuu qabaa. Fursad kasta oo aad haysid wax fikrad ah kama lihid waxa dhibaatadu noqon karto iyo sida loo xaliyo?
Kaliya waxay joojisaa barnaamijka markaan furo.
tirtir barnaamijka, ka dibna dami taleefanka 10 ilbidhiqsi, shid qaladkana waa la xalliyaa. Taasi waxay igu dhacday aniga oo ku jira qormada galaxy 10.1
Ku jawaab cygnus
Salaan! My S3 kaliya maahan dhibaato xaga dukaanka ciyaarta laakiin waxaa ku qoran "com.google.process.gapps" waa istaagtay .. .. hadaad i caawin karto runtii waan ku qanacsanahay.
Ku jawaab cle
Waxwalba waan uqabtay sida ay tahay hadana S3 ma daarto, waxay kusii jirtaa laydhka oo wax kale majiraan, qofna ma yaqaana sida loo xaliyo tan ???
Jawaab Claudio Mauricio Letzkus Almen
burcad nougat dijo
feylka kalena wuu mudan yahay
Ku jawaab turronpirata
hello tani waxaa loogu talagalay sgs3 ee shirkadda shakhsi ahaaneed ee Argentina.
Jawaab Javier Rodriguez
waad ku mahadsantahay xidid dhibaato malahan S3-kayga
Jawaab Sergio Rojas Mora
tayda waa ku guuldareysataa, waxay isu rogtaa casaan
Beddel dekedda USB, mararka qaarkood waxay dhacdaa in dekedda la isticmaalay aysan si fiican isugu xirmin. Markay taariikhdu ahayd 08/03/2013 18:56 PM, «Disqus» ayaa qortay:
hello francisco waxaan hayaa su'aal ah inaan xidido s3-kayga, waxaan ku rakibey my pc darawallada usb ee ugu dambeeyay ee aan la imaanin KIES ma waxay noqon doontaa in lala qaban karo kuwaas ama ma inaan rabaa kuwa aad ku muujiso casharro ?????
Ku jawaab jorge antonio
Iyada oo Kies aqoonsashada aaladda ayaa ku filan.
Aad baad ugu mahadsantahay casharka laakiin waxaan sameeyay dhamaan tillaabooyinka waraaqda anigoo wata galkayga s3 nooca ee ah android 4.1.2, waa loo dhameystiray sidaad ku sifeysay laakiin dib u bilaabida kadib, dalabka "supersu" ee aad sheegtay kuma jirin maareeyaha arjiga . Sikastaba xaalku ha ahaadee, waan soo dejiyey arjiga "Root Check" si aan u hubiyo haddii aan heli lahaa xididka oo aan xaqiijiyey in MAYA ... Ma haysaa wax fikrad ah waxa dhibaatadu noqon karto?
Kaadhka Odin ma ku siiyay?
Markay ahayd Maarso 9, 2013 10:08 PM, Disqus wuxuu qoray:
Haa si wax ku ool ah
Oo waxaan u maleynayaa in barnaamij la yiraahdo maareeyaha cwm la rakibay ... ma noqon karaa mise wuxuu ahaa markii la soo degsanayay "root chect"?
Jawaab Robert Amorós Linares
Waxay noqon kartaa, ku celi hawsha markale oo ii sheeg.
Waayahay, dib baan u dhigay ... hadda wax baan kuu sheegayaa ...
Kani waa feylka aan isticmaalo… DesktopRoot SamsungCF-Root-SGS3-v6.4.tar
Waxaan ku helay kaarka sanduuqa cagaaran ee dhanka bidix ee shaashadda waxaana helay xogtaan:
NAND Start Start !!
Dhammaan dunta ayaa la dhammaystiray (guuleysto 1 / guuldareystay 0)
Waa laga saaray !!
Mobiilkii ayaa dib loo bilaabay… hada waan arki karaa Supersu !!
(Waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay ahayd inaan ka raadinayay «maareeyaha dalabka oo aan ku jirin sanduuqa sidaad u sheegtay ... waan ka xumahay) markii la galay« supersu »laakiin waxay i weydiineysaa:« Labada nooc ee SU waxay u baahan yihiin in la cusbooneysiiyo. sii wad? maxaan u sheegaa?
Cusboonaysii labada nooc oo ku raaxayso xididka.
Aad baad u mahadsantahay, waan kuugu hanbalyeynayaa casharka ... waxaad tahay xariir.
Waxaan rajaynayaa inaan dhawaan arko cashar ku saabsan sida barnaamijyadu u dhexeeyaan dhowr Samsung ... (mobilada iyo tab) ... dhowr jeer ayaan arkay laakiin waxaan aaminsanahay in kabadan midkaaga hehehe
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin salaan kadib.
Waxaan aqrinayay fagaarayaal kaladuwan oo ku saabsan mowduucan xididaysan su'aashayduna waxay tahay tan ELKC mise SHE ?????
waad mahadsantahay marka hore
Ku jawaab to desesg
Salaan kadib, waxaan sameeyay tillaabo kasta oo odin ah PASS !! Iftiinka cagaaran laakiin markii taleefanka dib loo bilaabay waxaa lagu daayay shaashadda madow oo muujineysa soo dhaweynta Samsumg GalaxySIII waxna kama qabaneyso caawimaad deg deg ah
Ku jawaab Douglas
Codsiga "supersu" ee aad sheegtay ma muuqdo ... Waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan
Jawaab Eve Ruiz
Way ii muuqataa
Odin v.3 matoor (ID: 3) ..
Ku celi hawsha oo dhan mar kale adoo u beddelaya fiilada USB-ga god kale oo ku yaal PC-ga
Horey ayaan ugu sameeyay kumbuyuutarka oo dhan laakiin odin ma arko marka ay dajisan tahay
Dib u cusbooneysii wadayaasha oo dib u bilow PC-ga
Markay ahayd 14/03/2013 18:21 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Hore ayaan u qabtay waxna ma qaban
Waan ka xumahay waa
Waan sii wadaa isku dayga mana shaqeynayo
Waxay lahaan doontaa wax la sameeyo oo aan sim lahayn
Haddii kiesyadu furan yihiin, xiro, isla waxbaa igu dhacay, laakiin maxaa yeelay markii aan taleefanka ku xirmay wuxuu si otomaatig ah u furay kies Lite, laakiin markii aan xiray oo aan mar labaad isku dayay Odin, WAX KASTA OO DHAMMAAN
ooh mahadsanid faallooyinkan isla wixii igu dhacay aniga
Francisco Waxaan awalba ka rujin kari lahaa oo xitaa ka saari lahaa astaanta wadaha, laakiin waxay u tagtay nooca android 4.0.4, sideen u cusbooneysiiyaa?
Francisco horeyba wuu u maareeyay inuu xididada galiyo xitaa wuxuu soo saaray astaanta wadaha laakiin waxaan ku haray nooca 4.0.4 sidaan u cusbooneysiiyay
Waxa ugu fiican ayaa ah haddii aad rakibtay soo-kabashada wax laga beddelay waxaad iftiimineysaa rooma la kariyey.
Markay ahayd 15/03/2013 13:48 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Ma ii sharixi kartaa sida loo sameeyo?
sidee u sameysay Waxaan hayaa qaladkaas tmb
Haye, iga raali noqo, waxaa laga yaabaa inaad i caawin karto.Waxaan rabaa inaan hoos u dhigo jb 4.1.2 ilaa ics laakiin waxay ku xayiran tahay qayb ka mid ah system.img horeyna wey u jirtay dhowr saacadood howshana ma dhamaaneyso ..
Jawaab Wilson Reinoso
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay casharka laakiin su'aal, waxaan isku dayaa inaan ku bilaabo habka soo kabashada laakiin ma awoodo. Waxaan isku darayaa furayaasha waxaanan heystaa 2 ikhtiyaar oo vol - bilaw si caadi ah iyo vol + se keda oo ah qaabka dowloading ...
Ku jawaab Rul
Waxaan isku aaminay inaanan geeri lama filaan ah ku dhicin !!!!!!
Jawaab Luis Angel Rivera Poma
Waa salaaman tahay, sidee baan kuugu sheegayaa in Samsung S3 marwalba tan ay ii soo direyso markaan rabo inaan xidido?
qof ma ii sharixi karaa waxa socda
Ma furi karo faylka la cayimay. (Khad: 1876)
Ku jawaab msdn
hi, waxay u shaqeysay sifiican samsung s3 oo leh 4.1.2, aad baad u mahadsantahay !!
Hello Francisco !! Ma garanayo waxaan sameeyay laakiin ma soo baxo. Tani waa waxa u muuqda:
terminal-ka wuxuu ku sii socdaa shaashadda madow ee ay android-ka ka muuqato iyadoo la soo degsaneysa ...
Ha dansan bartilmaameedka !!
Maxaan sameeyaa ???
Hello Francisco !!
Waa inaan dhibaato qabaa, waxaan raacay tillaabooyinka laakiin wax sax kuma aha odin waxay u muuqdaan:
Waxaan isku dayay inaan badalo USB-ga laakiin sidiisii ​​ayuu ahaanayaa halka s3 uu kusocdo shaashadda Soo degida….
Maxaan sameyn karaa ???
Wax la mid ah ayaa igu dhacay, nasiib ahaan inaadan furi doonin kies? Waxaan u tuuray qaladkaas in furayaashu furnaadaan. Telefoon ku xiran oo ku xiran, waxaad fureysaa odin, waxaad xirxireysaa kies, taleefanka waad damineysaa, waxaad galaysaa qaabka, wuxuu aqoonsan yahay odin oo waad sameynaysaa,
Jawaab Oscar Manqueros
Wax walba si sax ah ayey u socdeen, laakiin dhibaato ayaa i haysata, mar aan dib u bilaabo kombiyuutarka, oo aan galo cwm, waxaan helayaa fariin, «Noocani maareeyaha CWM waa in loo adeegsadaa CF-CWM v 1.1 ama ka cusub. Waxay u muuqataa inaad ku socoto soo kabasho ka duwan. Astaamo kala duwan ayaa naafada ahaa »Taasi dhibaato ma keeni kartaa?
Hambalyo, waxaan ugu dambeyntii awooday inaan si guul leh xidid ugu noqdo, kuwa idinka mid ah inay wax la mid ah idinku dhaceen, wixii aan sameeyay waxay ahaayeen wax iska caadi ah, dib u furay wax walbana way fiicnaayeen
Hadda su'aashaydu waa mid kale, waan ogahay inaysan la xiriirin boostada laakiin waan ku cusbahay tan waxaadna leedahay khibrad badan. Waad arki doontaa, mar haddii xididku dhammaado waxaan raadinayey inaan helo CyanogenMod, waxaan ka soo degsaday dhowr zip boggan. Asta sifiican ayaa halkaas ugu jirta, laakiin markaan u imaado nuqul kaarka SD-ka ee leh terminaalka kumbuyuutarka ku xiran qalad ayaan ku helayaa mana ii ogolaanayo. Aan aragno haddii aad i siin karto fiilo.
saaxiib wanaagsan, waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii aan xidid ku yeesho tan macnaheedu waa in gobolka qalabkaygu ku dhacayo wax laga beddelayo? ama waxay kusii jirtaa xaalad caadi ah sii wadida helitaanka cusbooneysiinta iyadoo loo marayo OTA… Waxaan haystaa 4.1.2 baseband 19300XXMA1 iyo nambarka isku darka JZO54K.19300XXEMA2 Waxaan sugayaa jawaabtaada… salaan mahadsanid
Waxaad awoodi doontaa inaad sii wadato helitaanka cusbooneysiinta sida caadiga ah, maxaa dhacaya haddii ay tahay inaad ogaato waa inaad lumisay dammaanad la mid ah.
Markay ahayd Maarso 26, 2013 16:57 PM, Disqus wuxuu qoray:
Waxaan haystaa nooca 4.1.2 ee android oo kujira amsung galaxy s3, waxaan aqriyay in dhimashadu aysan saameyn ku yeelan noocaan ah android, laakiin s3keygu wuxuu bilaabayaa inuu laalaado ugu yaraan seddex jeer maalintii, kaa caawi inaad ka fikirto asalkeeda inuu xallin doono dhibaatada ?
Jawaab Percy Roy Ramos Rodriguez
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga 🙁 Ma garanayo sababta, laakiin waxaan furey codsigii tweeter-ka oo wuxuu joojiyey inuu ku dhago sida blackberry. Ma ogi inay taasi tahay iyo inay ku caawin karto :(.
Ku jawaab Andre
Hello Francisco. Waan xididaa galaxys3 mana helayo supersu. Sidoo kale dhammaan barnaamijyada xididdada ayaa isiiya dhibaatooyin, way xannibaan, tusaale ahaan maamulaha xididka. Waxaan dib u cusbooneysiiyay tillaabooyinka xididka laakiin dhibaatadu way sii socotaa. Ma ka noqon karaa xididka? Waad ku mahadsan tahay kana xumahay jaahilnimadayda.
Jawaab Francisco Giraldez
Isku day inaad tijaabiso deked kale oo USB ah iyo hadaad rabto inaad dib ugu noqoto qalabkii hore ee asalka ahaa rakib nooc kasta oo aad ka heli karto sammobile.com
Waad salaaman tihiin, waan sameeyay wixii aad igula talisay laakiin ma heli karo tusaalaha terminalkeyga. Waan walwalsanahay maxaa yeelay heerka hoose ee aan ku haysto tan waxaan u maleynayaa inaan ku deg degay. Iga raali noqo laakiin waxaan kaa rabaa inaad iga caawiso xalinteeda. Waxaan ka ogahay faallooyinka bartaada internetka inaad danaynayso gargaarka. Mar labaad aad baad u mahadsantahay waxaanan rajaynayaa jawaabtaada.
Mawduuc: [androidsises] Re: Samsung Galaxy S3, Root and Recovery on Android 4.1.2
Waad salaaman tihiin, waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan sifiican ayeyna udhaceen laakiin hada markaan bilaabayo isticmaalka taleefankayga. khadadka barnaamijyada waxay bilaabeen inay kasoo muuqdaan shaashada taleefanka si sax ah ayuu u shaqeeyaa laakiin ma joojinayaan khadadka muuqashada ee barnaamijka
Waad salaaman tahay, ka jawaab francisco, fiiri maalin ilaa xigga acer a500 kiniin ah ayaa igu dheggan astaanta astaamaha waxaan isku dayaa inaan ku furo furaha korontada iyo badhanka mugga hoose waxaanan helayaa daanyeerka android oo leh saddexagal casaan ah waana isku dayay inaad wax ka soo dejiso sd laakiin waxba ... Sababtoo ah wax badan oo aad ogtahay, waad i caawin kartaa, waan ku qanacsanahay, aad baad u mahadsan tahay. Emailkeyga ayaan kuu daayay si aad iiga jawaabto .. lmincone@gmail.com
hello, dhibaato ayaan ku qabaa GS3, Waxaa jiri lahaa ciyaaro qaar (dagaalka casriga ah 4, N: O: V: A3, Dhirta VS ZOMBIES, iyo kuwa kale), Waxaan aqriyay in 3D Chainfire ay i caawin karto, laakiin waan rakibay Taleefankayguna dib ayuu u bilaabmay kumana dhaafayo astaanta (samsung galaxy siii) Waxaan dib u soo ceshay xogtii warshada walina waa sidii hore, hadaad wax ogtahay fadlan i caawi. Mahadsanid.
Jawaab Farid Villacis Leiva
Qayb ka mid ah nidaamka ayaa la jeexjeexay. Waxaad u baahan doontaa inaad bir bir ah. Waxay igu dhacday aniga oo wata mm2. Waan ka bedelay qalabka 'firmware' waxaanan qalad ku galay ogolaansho Waxaan joogaa bootanimation sidaada oo kale. Markaa waxaan ku khasbanaaday in aan birta rogo.
Sidee ayey u tahay in feylka romantiga aan haysto s3 mini isla markaana isla waxbaa igu dhaca aniga, kumuu shuban nidaamka, kaliya wuxuu si toos ah ugu socdaa qaabka soo kabashada
Jawaab ku sii Manuel Fernández
Iska diiwaangeli sammobile oo soo dejiso wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u iftiimiso qalabka ugu dambeeya ee boosteejadaada, markaa waxaad ku soo kaban doontaa Odin.
Markay ahayd 28/04/2013 06:00 PM, «Disqus» ayaa qoray:
haye qolkaygu wuu baxay oo kaliya samsun galaxy ayaa soo baxda oo dami maysa mar dambe ma shaqayso mana laha degenaan
Anigu waxaan ahay Habanero dijo
Waad salaaman tihiin. Qofna ma i caawin karaa. Waxaan isku dayayaa inaan xidido oo iima oggolaan doonto. taleefanka ayaa diidaya. waxaana helayaa fariintan.
Howlgal dhameystiran (Qor) wuu fashilmay.
Waxaan haystaa sansun galaxi SIII mini (GT18190)
Jawaab aniga waxaan ahay Habanero
Hagaag hada waxay noqotay in uusan xitaa ii ogoleyn inaan taleefanka si caadi ah u daarto, busff waan khalkhalsanahay. Ma jiraa qof ila talin kara waxa aan sameeyo.
Waxaan hayaa Vodafone S3 oo la cusbooneysiiyay iyadoo la adeegsanayo ota ilaa nooca 4.1.2 oo markaan furaha furaha furo ma aqoonsanayo.
Ku jawaab htcmaniaco
odin wuxuu ii sheegaa guuldareysi, taleefanka gacanta waan ka furi karaa ama dami karaa oo dib u shidan karaa sidii anigoo aan waxba qaban, ma aniga caadi bay noqonaysaa?
Fadlan ma iiga jawaabi kartaa aniga oo aanan garanayn waxa aan ku sameeyo taleefanka gacanta qaab dejinta
wanaagsan waxaan hayaa s3 gt-i9300 kamana shidin waxaan iibsaday batari kale hadana waxaan siiyaa badhanka korontada waxayna kusii nagaan doontaa samsung galaxy s3
Wax kasta oo kaamil ah, ma aha dhibaato markii xididka
Jawaab Enrique Romagosa
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii Chianfire CFRoot ay ansax tahay s3 mini gt 18190NXXALL4 4.1.2 iyo waliba haddii ay tahay inaan ku xiro kies, maxaa yeelay waxaan ku xirey pc-ga markii ugu horreysay oo waxaan bilaabay inaan sameeyo nooc ka mid ah rakibo mana garanayo inay taasi ku filan tahay in la aqoonsado darawalada
Waad salaaman tahay, ka dib markaad sameyso asalka, wifi ma shaqeynayo, waad ogtahay sida loo xaliyo dhibaatadaas, waan ku qanacsanahay caawintaada.
Dhibaatadaas ayaan qabaa. Qof ayaa xal ...
Jawaab Gustavo Garcia
Sannadkii 2009 dijo
Waad salaaman tihiin. Waan raacay tilmaamaha waxayna u shaqeysay si qumman! Waxaan hayaa su'aal hadda: markaan galo ikhtiyaarka ah inaan cusboonaysiiyo ama dib u eego samsung update, waxay ii sheegaysaa in qalabka wax laga beddelay oo aan la cusbooneysiin karin. Maxay taasi tahay oo sidee baan ku xallin karaa? Ma cusbooneysiin karo taleefanka cusbooneysiinta Samsung?
Salaan. Waxaan haystaa galaxy three waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay jirto wado kasta oo badhanka mobilka xogta loo daarayo loona daminayo iyadoon la galin goobaha. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah barnaamijyada ii oggolaanaya inaan ka sameeyo shaashadda weyn. Waan qaddarin lahaa macluumaadka.
Jawaab Wilfredo Vega
Waxaad ka heli kartaa baarka ogeysiiska, halkaasoo ay ku yaalliin badhannada dansan iyo kuwa ka baxsanba.
Tan iyo markii aan rujin taleefanka igama xidho kies, waxa uu ku meel gaadh ah sida «Isku xirka ...».
Jawaab Daniel Candel Martínez
hello dhibaato ayaan qabaa waxaan rabay inaan xidido s3-kayga markaan odin kujirona waan fashilmay galkaygiina wuxuu kusugnaa qaabka soo dejinta, maxaan ku sameeyaa kiiskan
Tani waxay hagaajineysaa dhibaatada Samsung Galaxy S3?
Dhibaatada jirta ayaa ah in kaligeed ay barafoobaan oo ay markale shaqeyso, waa inaan damiyaa oo aan shidaa?
Jawaab Stefan Abarza
Waad salaaman tihiin, ma loo baahan yahay in debinta USB-gu ay firfircoon tahay ???
Ku jawaab wako
Su'aal ka dib markaad tallaabooyinkan oo dhan sameyso taleefanka ayaa mar kale lagu soo cusbooneysiiyaa barnaamijyada
Ku jawaab leo cepeda
Waxaan raacay tillaabooyinka casharka iyo wax walba oo ay u kala horreeyaan .. aad baad u mahadsan tahay
Waxaan hayaa warshada asalka ah ee Galaxy S3, nooca 4.1.2, ashpalt 7, batman, casriga 4 ma fureyso, shaashad madow ayaa wali sidii iskuday ah inay rarto. Ma jiraa qof yaqaan sida loo xaliyo ???
My s3 ma xididaysanayn waxaanan doonayay inaan ku dhigo habka soo kabashada imikana kama saareyso farriin oranaysa kor u qaadista qalabka firmware ayaa la kulmay arrin Fadlan dooro qaabka soo kabashada ee kies iskuna day markale. FADLAN II SHEEG WAXA AAN SAMEEYO
Nabadeey Francisco, waan sameeyay asalka wax walbana waa qumman yihiin, marka laga reebo in markaan rabo inaan damiyo ama aan dib u bilaabo anigoo adeegsanaya badhanka midig, taleefanka gacantu wuxuu ku fariisanayaa shaashadda xiritaanka mana daminayo, maxay noqon kartaa?, Salaan ama cashar wanaagsan.
wanaagsan batteriga s3 wuxuu soconayaa kala bar waxa socdey oo aan kala saari karo sidaan u qaabeeyo super su ama aanan taaban, miyaan ka saari karaa ???
Jawaab Leito Rulo
Waa salaaman tahay, samsung s3 markaan daarto waxay kusii dhagan tahay shaashadda salaanta ee taleefanka, halkaas oo ay ka muuqato astaanta, oo way sii jeesaneysaa, damineysaa oo daaran tahay. Maxaan sameyn karaa?
Jawaab Ana Maria
Saaxiib badan oo grax ah !!!
Dhamaan prfct, ee SGS3 4.1.2 JB
HELLO ROOTE MY S3 GALAXY HADA WIFI KAYNA MA SHAQEEYO WAQTIGA WAQTIGA WAAN SIIBIYAA SI DEG DEG AH AYAA SOO KASTA WAAYO WAA
Jawaab Mario Torres
Miyaad horay u xalisay? Maanta naftayda waan joojiyaa 🙁
Samaynta tan waxay kaa qaadaysaa dhibaatada dhimashada degdega ah?
Waa salaaman tahay !!!! degdeg ah !!!! Waxaan ku dhegay markii aan xididadayda s3 ku qaatay tallaabada khariidaynta foomka Hel PIT !! Maxaan sameyn karaa?
Laba aqoonsi: com ODIN ayaa i ogaada, taasi dhibaato ma tahay?
Ku jawaab suco
Ka fur USB-ga, dib ugu xir deked kale oo ku celi hawsha
Paty 1184 dijo
Sidii oo kale ayaa igu dhacda !!! Caawin ficil ah! Khadka kama jarto ama ma jabiyo Mobile-ka.
Taasi waa sababta oo ah waxaad calaamadeysay sanduuqa 'RE-PARTITION', waxaad sugtaa in wax walba ay dhammeeyaan ama guuldareystaan ​​iskuna day inaad howsha oo dhan mar labaad bilowdo.
Salaan ka timid Venezuela…
Waxay ku rakibeen roon 4.2 waddan qalaad taleefankayga.
Hadda oo aan doonayo inaan meel dhigo mid kale oo aanan awoodin, maxaa yeelay taleefankaygu kuma xirna Kies ... Ma haysto hab aan ku garto, wax walba waan qabtay, maxaa dhacaya haddii aan beddelo kombuyuutarrada, ka waran haddii, bedel fiilada USB-ga ... ugu dambeyn ...
laakiin maya, ima xiriiriyo. !! Haddii aanan fulinin tallaabadaas ugu horreysa, ma aadi karo tallaabada odin i dhalaalaysa ...
Waxaan ahay quus
Waad salaaman tahay, waxaan isku dayayaa inaan rogrogo waxayna i siisaa qaladkan, maxaan sameeyaa
Ku jawaab escuderet
la xaliyay Waxaan furay kies
Iima aysan shaqeeyn aniga, ma gasho qaabka soo dejinta
Jawaab Pedro Peña
Ma gasho qaabka Download, fadlan caawi.
Waad salaaman tihiin, barnaamijka 'supersu app' lama rakibin oo hadalkaba ereyga dib u dajin ayaa soo muuqday marki hore daqiiqad kadib ereyga ayaa dhaafa, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab marlboro
Horey ayaan usameeyay howsha oo dhan isla waxkastana way sii socdaan, fadlan, qof aniga i caawin kara.
Taleefanka gacanta ayaa loo siidaayaa shirkad kasta? Mahadsanid
Ku jawaab manuberto
Galab wanaagsan Francisco, waa su'aal, kumbuyuutarkaygu wuu xidid yahay haddii aan si otomaatig ah u cusbooneysiiyo waxaan fahamsanahay in xididka la tirtiray, ma? Maxaa dhacaya haddii rooting la tirtiro, ma sii shaqeynayo ama kuma laabaneyso qaabeyntii ay laheyd kahor intaan la rujin, taas oo ah, qaabeynta shirkadda taleefanka, mahadsanid
Waxaan ku xididaystay samsung galaxy S3 odin iyo faylka CF-Root si sax ah ayaan u sameeyay.
Waxaan helay SuperSU laakiin waxaan u maleynayaa in xarunteyda la cusbooneysiiyay oo aysan mar dambe ii oggolaan doonin inaan galo SuperSU.
Hadda waxay ii sheegaysaa inay tahay inaan rakibo binaries oo aan dib ugu xidho gacanta. Sideen u sameeyaa?
Jawaab Joaquin Rovira
Ma iga caawin kartaa inaad eegto s3 mini lp waxaan isku dayay inaan ku xidido odin laakiin way ku fashilantay! Iyo ps waan xiray wax walbana waxaan kudhaca batteriga unugga waana xukumaa laakiin markaa wuu gaabiyay hada kumana siinayo xiriir USB ah, taleefanka iima siinayo pc-ga, waxaan ula jeedaa, unugga oo kaliya ayaa dacwada, aniga ha haysan ikhtiyaar isku xirka warbaahinta badan ama ptra k elojes oo kaliya ayaa la rabaa oo pc-ga ayaa leh ma aqoonsano, waan sameyn karaa, fadlan i caawi
Ku jawaab hekoz
Waxaan hayaa samsung galaxis Sii shaashadda Soo degsashada ha dansan bartilmaameedka maxaan sameeyaa
Jawaab Susanne Barrada
bns dhibaatadeyda S3 waa tan soo socota ma shidato noi waxba ma qabaneyso wixii aan ka aqriyayna waa geeri lama filaan ah
oo haddii aysan shidan ama aysan wax sameynin tallaabada cilad-saarka USB-ga laguma sameyn karo xaaladdaas
Jawaab ku ron
Waxaan soo iibsaday nus isticmaal S3 markii aan guriga imidna waxaan doonayay inaan ku xiro WiFi oo kaliya waxay ii sheegtaa qalad xaqiijin ah, horay ayaan ugu qaatay inuu sameeyo oo iyagu uma arko inay qalad tahay in qof garanayo sida loogu sheego. aniga, ma aqaan waxa la sameeyo
Jawaab Jorge Gonzalez
Taleefanka gacantu wuu dhintey, ma daarmayo iyo ka hor inta uusan dansan. Android-ka ayaa soo baxay mana daarna, maxaan sameeyaa?
s3, sida oo kale wuu dhintay
Telefoonku wuxuu galay qaab dajinta oo wuxuu yiri ha dansan bartilmaameedka, wuxuu ubaahan yahay wifi si uu howlgalkaan uqabto.
dhanka bidix wuxuu ku leeyahay:
Magaca soo saaraha gt-19300i
binary concur: sansanung rasmi ah
nidaamka rasmiga ah
dowload aamin ah: karti
Ku soo jawaab Albaaniyaan
hi francisco… walaal waxaan hayaa S3 I9300 wuuna khaldanyahay wicitaan ma sameyn karo wuxuu ii sheegayaa KALIYA DADKA DEGDEG AH ee aan fulin karo si aan u xaliyo